रोचक जानकारी – MeroJilla.com
२० वर्षीया युवतीका दुईवटा पाठेघर, १ महिनामै जन्माइन् ३ बच्चा ! Saturday, March 30th, 2019
कहिलेकाहीँ दुनियाँमा यस्ता घटना हुन्छन्, जसले विज्ञान तथा प्रकृतिलाई नै चुनाैती दिने हैसियत राख्दछन् । बंगलादेशमा हालै यस्तै भएको छ, जसका कारण चिकित्सा जगत र आम मानिससमेत तीनछक परेका छन् । एकजना बंगलादेशी युवतीले एक महिनाको बीचमा २ पटक सुत्केरी भएर ३ वटा बच्चा जन्माएकी छन् । पहिलो बच्चा जन्माएको २६ दिनपछि ती युवतीले फेरि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी हुन् । आरिफ सुल्तान..
फूल्चोकी मिडियाका सञ्चालक र विवादास्पद मोडल परी तामाङ पक्राउ कारण यस्तो छ | Wednesday, March 20th, 2019
काठमाडौं । विवादास्पद मोडल परी तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत सामाजिक मर्यादामा खलल पुर्‍याउने सामग्री र उत्तेजक अन्तरवार्ता दिएको आरोपमा उनी पक्राउ परेकी हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुले उनीसहित फूल्चोकी मिडिया ग्रुप नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक राजकुमार कुँवर र कार्यक्रम सञ्चालिका लक्ष्मी मोक्तानलाई पनि पक्राउ गरेको हो..
‘वाइल्ड’ हुन चाहने प्रियंका Wednesday, March 13th, 2019
नायिका प्रियंका कार्की यतिबेला इन्डोनेशियाको बाली पुगेकी छिन् । पर्यटकहरुका लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको बालीमा प्रियंका र उनका प्रेमी नायक आयुष्मान देशराज जोशी पुगेका हुन् । नायिका कार्कीलाई आयुष्मानले सरप्राइज ट्रिप दिएका हुन् । केही दिनदेखि बालीमा मस्ती मुडमा रहेको यो जोडीले आफूहरुको तस्बिर सार्वजनिक पनि गरिरहेको छ । यसैविचमा, नायिका प्रियंका कार्कीले..
अनौठो चलन, युवतीको योनी सिलाउनेदेखि स्तनमा आइरन गर्नेसम्म Thursday, March 7th, 2019
एजेन्सी। पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्छन। जसको परम्परा र सभ्यता पनि फरक फरक हुन्छ। ती मध्ये कतिपय स्थानमा युवतीहरुलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गरिन्छ।आज हामी तपाइँहरुलाई केही यस्ता परम्पराका विषयमा जानकारी दिँदैछौं जहाँ युवतीहरुलाई अमानवीय तरिकाले यातना दिइन्छ। पूर्वी अफ्रिकामा यस्तो जाति छ, जसले छोरी मान्छेको योनी सिलाइ दिन्छन्। छोरी मान्छेले विवाह..
अनुसन्धान: महिलालाई पुरुषसाथी भन्दा कुकुर सँग सुत्दा मिठो निन्द्रा लाग्छ Sunday, December 2nd, 2018
क्यानडा । हामी सबैका लागि निन्द्रा महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक जीवका लागि निन्द्रा वास्तवमा अपरिहार्य छ । राम्रो स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि जसरी हामीलाई पोषक तत्व आवश्यक हुन्छ। त्यसरी नै निन्द्राको महत्व पनि स्वास्थ्य सँग जोडिएर हुन्छ। दैनिक जीवन यापनकै सहजताको लागि पनि निन्द्रा धेरै उपयोगी हुन्छ । यदी शरीरको लागि लामो उमेर चाहिन्छ भने हरेक मानिसको लागि दिनको कम्तिमा..
१०१ बर्षको उमेरमा नागरिकता Monday, October 29th, 2018
डोटी - मान्छे सबैभन्दा खुसी कहिले हुन्छ ? डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–७, पोखरीकी जगुदेवी खड्काको जवाफ छ, ‘नागरिकता पाउँदा ।’ हुन पनि उनले १ सय १ वर्षमा आइतबार नागरिकता पाइन् । ‘यो उमेरमा नागरिकता लिन पाउँदा मन फुरुङ्ग भएको छ’, प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएकी उनले भनिन्, ‘अब सरकारले सम्मान र सुविधा पनि दिन्छ कि ? ’ जगुदेवीलाई आजसम्म नागरिकता चाहिएकै थिएन । जिन्दगीमा उनले आफ्नो..
कञ्चनपुरमा ज्वाइँले भगाए जेठानकी श्रीमती Saturday, October 6th, 2018
कञ्चनपुर - भीमदत्त नगरपालिका सुकासालमा बसोबास गर्दै आएका ३० बर्षीय पन्नालाल मोर्याले आफ्नै जेठान हरिस दमाईकी श्रीमती द्रोपती दमाईलाई भगाएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको समाचारअनुसार, मोर्याले द्रोपतीलाई मायाजालमा पारेर बेच्नका लागि लगेको बारे प्ष्ट नभएको परिवाले बताएका छन् । पन्नालालको स्थायी घर भने भारतको पिलिभित हो । बहीनी ज्वाइँले आफ्नै श्रीमती..
विविसी– अमेरिकामा ७० वर्षअघि एक किसानले एउटा कुखुराको टाउको काटिदिए । तर, टाउको काटिएको त्यो कुखुरो तत्काल मरेन, १८ महिनासम्म बाँचिरह्यो । चकित बनाउने यो घटनापछि यो कुखुरो 'मिराकल माइक' नामबाट विश्वचर्चित बन्यो । यो टाउको काटिएको कुखुरो यति लामो समयसम्म कसरी बाँच्न सक्यो ? १० सेप्टेम्बर १९४५ मा कोलाराडोस्थित फ्रुटामा रहेको आफ्नो फार्ममा लोयल ओल्सेन र उनकी पत्नी क्लारा..
पर्वत- पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा रहेको पशु सेवा शाखाले पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधारण सेवालाई कृषकहरु माझ पु¥याउन आकर्षण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कृषकहरुलाई कृत्रिम गर्भाधान प्रति आकर्षण गराउन सुत्केरी गाईभैसीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कार्यक्रममा गाईभैसीलाई कृत्रिम गर्धाधारण गराउने कृषकहरुलाई पोषण भत्ता स्वरुप २ हजार ५ सय..